कवाडमा काट्न राखेका जहाज यति एयरलाइन्सले दशै र तिहारमा उडाउने ! – YesKathmandu.com
कवाडमा काट्न राखेका जहाज यति एयरलाइन्सले दशै र तिहारमा उडाउने !
बुधबार ०५, असोज २०७३
काठमाडौं । दशै, तिहार र छट जस्तो पर्वमा तपाई हवाई सेवा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? हवाई सेवा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस् तपाई चडेको विमान कवाडमा काट्न राखिएको पुरानो जहाज पर्न सक्छ ।
दशै, तिहार र छटलाई मध्यनगर गरी नीजि क्षेत्रका एयरलाइन्सहरुले टिकट बुकिङ खोलेका छन् । यही मध्येको एक यति एयरलाइन्सले भने विग्रिएर थन्क्यिाएका पुराना जहाजलाई समान्य मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लागेको छ । यात्रुहरुको चाप बढेपछि यति एयरलाइन्सले प्राविधिकरुपमा निकै कमजोर जहाजको उडान भर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।
यति एयरलाइन्सले प्राविधिकरुपमा कमजोर जहाजमा उडान भर्ने तयारी गरेको सुचना पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग पुगेको छ । सुचना पुगे लगतै मन्त्री शाहीले नेपाल उड्यन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘विग्रिएर थन्किएका जहाजलाई सामान्य मर्मत र पेन्टिङ गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको सुचना मन्त्रीज्यूसँग आएको छ’ मन्त्री शाहीको नीजि सचिवालयले स्रोतले भन्यो ‘तत्काल मन्त्रीज्यूले छानविन गर्न सम्बन्धित ब्यक्तिलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।
मन्त्री शाही आफै पनि पाइलट हुन् । उनले जहाजका बिषयमा धेरै जानकारी राख्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय भएका हवाई दुर्घटनाका बिषयमा उनले अध्ययन पनि गरिरहेका छन् । विश्वको धेरै हवाई दुर्घटना हुने देश नेपाल हो । नेपालमा सञ्चालित नीजि एयरलाइन्सका कारण दुर्घटना धेरै हुने गरेका छन् ।
एउटा टुर एण्ड ट्राभल्सबाट सुरु भएको यति एयरलाइन्ससँग पुराना र कमजोर जहाज छन् । त्यसमध्ये पनि विग्रिएका जहाजलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी यति एयरलाइन्सले गरेको छ । नेपालमा सवैभन्दा बढि यति एयरलाइन्समा जोखिम भएको नागरिक उड्यन प्राधिकरणको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
तर यति एयरलाइन्सका सुचना अफिसर भीमराज राई भने यो बिषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् । ‘कसले के भन्छ त्यसका पछाडी के प्रतिक्रिया दिँदै हिड्नु’ उनले भने । पुराना र थन्क्यिाएका कमजोर जहाज उडानमा ल्याउने गरेको तयारीका बिषयमा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
आठ लाख घरमा डिस होम
One thought on “कवाडमा काट्न राखेका जहाज यति एयरलाइन्सले दशै र तिहारमा उडाउने !”
durghatana bhayo bhane ko jimmewar huncca?
अर्वपति विनोद चौधरीको होटल छेउमा गैडाको मृत्यु, नौ कर्मचारी नियन्त्रणमा
इयूको सुझावमा नेताहरुको आक्रोस, बाबुरामले भने-गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश !
सद्भावनाका क्षेत्रिय अध्यक्ष कुटिए
सेनाको २५० बर्षे इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधान सेनापति बन्ने बाटो खुल्यो
पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे चढेको कार त्रिशुली नदीमा खस्यो
प्रकृति संरक्षण कोष वनमन्त्रीको भर्तिकेन्द्र
महाधिबेशनमा गुटगत निर्वाचन बनाउनु महाभुल थियोः ज्वाला
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई कानुनी जवाफ दिन एमाले नेताहरु आयोगमा
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ६ प्रदेशमा बिहान १० देखि ३ बजेसम्म निर्वाचन हुँदै
विकास र समृद्धिको समय हो – गृहमन्त्री थापा
क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा अनन्तका प्रियपात्र रञ्‍जित बिजयी, जनार्दनका प्रिय पात्र पराजित
होटलवालाले रक्सी बाहेक सबैथोक पाइन्छ मन्त्रीज्यू भनेपछि